Izu a nke Sony Xperia Ear kụrụ n'ahịa | Akụkọ akụrụngwa
Izu a nke Sony Xperia Ear kụrụ n'ahịa
Oge nke onwe, ekweisi ekweisi, ọbụlagodi nke ahụ bụ ihe ọ na-ada ka, dịka Sony webatara nke ha ozugbo Apple na Samsung. Agbanyeghị, ọ dị ka Sony ọ dị ntakịrị ọsọ ọsọ na ụdọ mmepụta, ebe ekweisi nke ụlọ ọrụ Japan ga-erute ndị nwe ha n'izu na-abịa, ebe Apple na-etinye aka n'ọchịchịrị ma ha ga-abata. ekweisi ọhụrụ nke AirPods maka oge ire ere ekeresimesi. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ike ịmata nke a Xperia Ear, ọzọ ọzọ nke wireless ekweisi na ga kụrụ ahịa n'izu a.
Ọ ga-abụ ọnwa asatọ ka Sony wepụtara ekweisi ọhụrụ a. Nsogbu bụ na ha enweghị nkwado maka Siri ma ọ bụ Google Ugbu a, ya mere, ha kpebiri itinye onye enyemaka ha kpọmkwem site na ekweisi. Otú ọ dị, nnukwu ọdịiche ma ọ bụ nsogbu na ihe banyere Sony Xperia Ear, bụ na ọ bụ otu ekweisi, nke anyị nwere ike ijikwa oku, egwu na ọbụlagodi ozi, mana otu isi., ya mere ige egwu n'okporo ámá yiri ka ọ gaghị abụ isi ọrụ ya, na-anọgide dị ka ngwá ọrụ ọrụ, ebe ọ bụ na AirPods bụ akụkụ doro anya nke ntụrụndụ.
Dị ka anyị kwurula, ekwuru na Xperia Ear na nzukọ Mobile World ikpeazụỌzọkwa, ọ bụ ngwaahịa mbụ na ọkwa Xperia nke na-abụghị ngwaọrụ mkpanaka. N'ụzọ dị otú a, Sony chọrọ ịnwale ntakịrị ọgụgụ isi ya, tupu ị na-ebupụta Xperia Projector na Xperia Agent (robot ụlọ). N'ezie, ha agaghị adị ọnụ ala ma ọlị, € 199 ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta isi a na-akwadoghị maka ndị hụrụ egwu, kama iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Izu a nke Sony Xperia Ear kụrụ n'ahịa
Huawei MediaPad M3 ga-abata na USA ma ọ dịlarị na Europe
Russia mezuru iyi egwu ya ma gbochie LinkedIn na mba ahụ